မသန်စွမ်းသူများအကျုံးဝင်သော ကျန်းမာရေးစီမံချက်အတွက် အဆိုပြုလွှာများခေါ်ယူခြင်း။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလက်လှမ်းမီရရှိရေး ရန်ပုံငွေက မသန်စွမ်းသူများပါဝင်သော စီမံချက်အတွက် အဆိုပြုလွှာတွေခေါ်ယူနေပါတယ်။ ၂၀၂၁ ဧပြီ ၁ ရက် ကနေ
“အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သက်သေအထောက်အထားနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု”
လေးစားရပါသော ဆရာ/ဆရာမများခင်ဗျား, Christian Aids (မြန်မာ)၏ ရန်ပုံငွေအထောက်အပံ့ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော “အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်
လေးစားရပါသော ဆရာ/ဆရာမများခင်ဗျား, ဥရောပသမဂ္ဂ မှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုး၍ Helvetas Myanmar နှင့် ငြိမ်းချမ်းမေတ္တာအဖွဲ့ (Religious
Access To Health ရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုအောက်ကနေပြီးတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဖျားနာကုဆေးခန်း ၂၇ ခုအတွက် PPE ဝတ်စုံ (၁,၉၀၀) ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
Access to Health Fund ဖျားနာကု ဆေးခန်းများအတွက် PPE လိုအပ်ချက်ကို ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းခြင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့
Human Interest Story Writing သင်တန်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းကို COVID-19 အသေးစားရန်ပုံငွေ ရထားတဲ့ အရပ်ဘက်လူမှု့အဖွဲ့အစည်း ၅၁ ဖွဲ့က ဆရာ/မများက တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
Access to Health Fund ပုံပြင်ကောင်းတစ်ပုဒ်ဟာ အခြားလူတွေရဲ့ အမြင်အာရုံကနေတဆင့် အခြေအနေတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေကို ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခံစားရစေအောင်
“ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့နှင့် အသစ်ထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ရေးဆွဲထားသော ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒသစ်သည် ကျွန်မတို့ရဲ့ မယိမ်းမယိုင်သော စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်
သိလားစကားဝိုင်းရဲ့ တတိယမြောက်ဆွေးနွေးမယ့် ခေါင်းစဉ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ မွေးကင်းစကလေးကျန်းမာရေးကို အခြေခံပြီး Dr. Thelma Tun Thein
သိလားစကားဝိုင်းရဲ့ ဒုတိယမြောက် အစီအစဉ်မှာတော့ တင်ဆက်သူ Teresa Khine ၊ ကို Jonathan Khaing၊
အထူးအုပ်စုတွေကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ အခြားအကြောင်းအရာတွေကို Social Influencer မဝင်းမင်းသန်း၊မိတ်ကပ်ပညာရှင် ညီညီမောင် နဲ့ Host Teresa Khine
သာယာပျော်ရွှင်မှုရှိတဲ့ မိသားစုဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် မိသားစုစီမံကိန်း(Family Planning)ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်!
မိသားစုစီမံကိန်း(Family Planning)ဆိုတာ မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒအလျောက် ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ယူမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာယူမယ်၊ ဘယ်အသက်အရွယ်မှာယူမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစီစဉ်နိုင်ဖို့ သားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့
အသက် ၃၀ မှ ၄၅ နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အနည်းဆုံး(၁)ကြိမ် စစ်ဆေးသင့်တယ်ဆိုတာ သိလား?
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများအကြားမှာ ကင်ဆာရောဂါကြောင့် သေဆုံးရခြင်းတွေရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေထဲက ဒုတိယအများဆုံးကတော့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၀
အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ရန် တရားဝင်လျှောက်ထားတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတွေလိုသလဲ?
အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်းခွင့်ပြုလွှာရရှိရန် လျှောက်ထားရာမှာ အရင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူအောင် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြေလျော့ပေးထားပြီး အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို ပြည့်စုံစွာ တပြိုက်နက် တင်ပြနိုင်ပါက